Ny ekipanay - Chengdu Baishixing Science and Technology Industry Co., Ltd.
Year2015, Dr. Shi Changqing nanatevin-daharana ny orinasa, nanangana Studio fanavaozana, nitarika ny orinasa R & D ekipa, namolavola tetikasa lehibe maro ary nangataka patanty maro, izay nitondra fahafahana vaovao ho an'ny fampandrosoana ny orinasa.
Mirotsaka amin'ny R & D ny indostria simika nandritra ny 13 taona, tsara amin'ny fampandrosoana ara-teknika ny API intermediates sy heterocyclic vokatra.t.
Taorian'ny nahazoany diplaoma tao amin'ny Oniversite, dia nirotsaka tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra asidra amine ao amin'ny orinasa, miaraka amin'ny vokatra vaovao mihoatra ny 10 novolavolaina isan-taona.
Mirotsaka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny asidra amine andian-dahatsoratra vokatra nandritra ny 20 taona mahery, mahazatra amin'ny fananana, toetra sy ny vidin'ny tsena ny asidra amine vokatra rehetra, ary ny isan'ny tetikasa vaovao tahiry nahatratra am-polony.
Nandray anjara tamin'ny asa fitsapana nandritra ny 35 taona mahery, nanangona traikefa fitsapana manankarena.Ary manana fahaizana mamolavola sy manamarina ny fomba fitiliana asidra amine, tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny kalitaon'ny orinasa.
Lefitry ny mpitantana ny sampana fanaraha-maso ny kalitao, mihoatra ny 5 taona nanaovana fitiliana tao amin'ny orinasa.
Ny mpandinika ny tatitra rehetra ao amin'ny departemantan'ny fanaraha-maso ny kalitao dia manana toe-tsaina miasa amim-pitandremana sy fikarohana manokana.
Aoka ianao ho tompon'andraikitra amin'ny fametrahana sy fandrindrana ny antontan-taratasy rehetra ao amin'ny departemantan'ny fanaraha-maso ny kalitao.
Izy no tanjona fanofanana fototra ho an'ny taranaka vaovao amin'ny mpiasa fitiliana.
Acetyl-L-Leucine, 537-55-3, Pharmaceutical Chemical, L-Glutamine vovoka, L-Leucine, Dl-Pyroglutamic asidra,